बुद्धिबंगारा आउँदा किन दुख्छ ? – Etajakhabar
बुद्धिबंगारा आउँदा किन दुख्छ ?
काठमाडौँ -बुद्धिबंगारा शारीरिक कारणले सबैभन्दा ढिलो आउने दाँत हो । सामान्यतया यो दाँत १८ देखि २५ वर्षको उमेरभित्र आउने गर्छ । कसै–कसैलाई अझ ढिलो पनि आउँछ । आधुनिक खानपिन र जीवनशैलीका कारण बुद्धिबंगाराको भाग आजकाल झन् सानो हुँदै गएको छ । निकै सानो ‘स्पेस’मा यो बंगारा आउनै सक्दैन ।
खासमा यो बंगाराको कुनै काम नै छैन । खाना चपाउन पनि यसले कुनै सहयोग गर्दैन । पश्चिमा मुलुकतिर बुद्धिबंगारा दुख्नेबित्तिकै फाल्ने गरिन्छ । नेपालमा भने खपेर बस्ने चलन छ । नेपालमा त यो बंगारा आउनुलाई बुद्धि आएको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ । तर, यो अनावश्यक दाँतको कुनै काम नै छैन । यसको काम व्यक्तिलाई पीडा दिने मात्रै हो ।
यो दाँत एकैपटकमा आउँदैन । पटक–पटकमा थोरै–थोरै गर्दै आउँछ । यसैले लामो समयसम्म दुःख दिन्छ । यो आउने ठाउँ नै थोरै हुने भएकाले फुट्ने क्रममा अप्ठ्यारो भएर पीडा हुन्छ ।
बुद्धिबंगारा आउँदै गर्दा माथिल्लो भागको दाँतले थिच्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो भएमा पनि दुख्न सक्छ ।
बुद्धिबंगारा आउँदै गर्दा वरिपरिको मासुको भाग छेडेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा इन्फेक्सन हुन सक्छ । इन्फेक्सन भएमा दुखाइ बढ्छ ।नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २३, २०७४ समय: १०:५६:०८